Vice President U Myint Swe returns from Morocco – Ministry of Foreign Affairs
Vice President U Myint Swe and delegation who attended the Crans Montana Forum on Africa and South-South Cooperation in Morocco departed from Casablanca city in Morocco on 20 March, 2018.
Vice President U Myint Swe and delegation were seen off by State Administer H.E Mr.Zitouni, Myanmar Ambassador to Morocco U Myint Lwin and officials at Mohammed V International Airport. The delegation led by Vice President U Myint Swe arrived in Yangon on 21 March afternoon and they were welcomed by Yangon Region Chief Minister U Phyo Min Thein, Yangon Mayor U Maung Maung Soe and other officials concerned.
ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ မော်ရိုကိုနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
မော်ရိုကိုနိုင်ငံ၌ ကျင်းပသည့် Crans Montana Forum on Africa and South-South Cooperation အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ဒုတိယ သမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မော်ရိုကိုနိုင်ငံ ကာဆာဘလန်ကာမြို့မှ မတ် ၂၀ ရက် ဒေသစံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် လေကြောင်း ခရီးဖြင့် ပြန်လည်ထွက်ခွာကြသည်။
ဒုတိယသမ္မတနှင့်အဖွဲ့အား မော်ရိုကိုနိုင်ငံ ၊ ကာဆာဘလန်ကာပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး H. E. Mr. Zitouni ၊ မော်ရိုကိုနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမြင့်လွင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများက မော်ရိုကိုနိုင်ငံ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့နှင့်အတူ ပဉ္စမမြောက် မိုဟာမက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၌ ပို့ဆောင် နှုတ်ဆက်ကြသည်။
ဒုတိယသမ္မတနှင့်အဖွဲ့သည် မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့၊ ညနေ၄နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ပြန်လည် ရောက်ရှိကြရာ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ရန်ကုန် မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၌ ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ကြသည်။